XOG: Farmaajo Oo Ku Guuldareystay Qorshe Uu La Damacsanaa Shariif Sheekh Axmed & Siyaasiyiin Caan Ah - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada XOG: Farmaajo Oo Ku Guuldareystay Qorshe Uu La Damacsanaa Shariif Sheekh Axmed...
XOG: Farmaajo Oo Ku Guuldareystay Qorshe Uu La Damacsanaa Shariif Sheekh Axmed & Siyaasiyiin Caan Ah
Madaxweynaha Dawlada Dhexe Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku guuldareystay Qorshe uu doonayey inuu la heshiiyo siyaasiyiinta ka afkaarta duwan.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku rajo qabtay inay la hadasho qolyaha Mucaaradsan Dawlada Dhexe si bey yiraahdeen meesha looga saaro mad madowga Siyaasadeed.
Ilo wareed la helay ayaa sheeagay in Shariif Sheekh Axmed uu yahay Qunyar Socod aan siyaasadiisa Mucaaradeed aan soo bandhigin,marka loo eego C/raxmaan C/shakuur iyo Quurteysanayaasha Mucaaradka Dawlada.
Warar ayaa sheegaya in C/raxmaan C/shakuur uu diiday Dalab Villa Soomaaliya kaga yimid oo ahaa in Dawlada ay la fadhiistaan oo ay mad madowga jira loo xaliyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa labo sano Shalay ay ubuuxsan tahay Xilli Xafiiseedkiisa Shaqada Dalka iyadoo Dhaliilo badan loo jeediyey 24 Bil Ee Dalka uu xukunkiisa heystay,qaar lagu amaanay waxqabadkiisana waa ay jireen.
Kulankii ka dhacay Bishii hore Magaalada Garowe Ee Munaasabada Caleemo saarka Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lasoo sheegayaa in jawiga uu ka dhigan mid sidii hore la iskaga soo dhawaaday.
Dad lagu kalsoon yahay oo Maxalil ku ah Siyaasada Soomaaliya waxay Farmaajo ku sheegeen Seef la bood aan go’aankiisa ku cabirin ka fekirka waxa dhici kara berri,xilli Xasan Kheyre uu shanta kula jiro Masiir ka gaarida Madaxweynaha uu qaadanayo.